Olom-pirenena ao Antigua sy Barbuda - Fianakaviana NDF
Olom-pirenena ao Antigua sy Barbuda - Ny fianakaviana Fonds National Development Fund (NDF)
Olom-pirenena ao Antigua sy Barbuda - Ny Tahirim-pirenena ho an'ny fampandrosoana (NDF)
Ny National Development Fund (NDF) dia vola tsy misy tombony azo ampiharina amin'ny fanaraha-maso parlemantera amin'ny alàlan'ny tatitra enim-bolana aroso amin'ny Parlemanta amin'ny antsipiriany ampy hamela ny fangaraharana sy ny fandraisana andraikitra. Hamarinina amin'ny orinasa kaonty iraisam-pirenena koa ny vola.
Niorina eo ambanin'ny fizarana 42 (2) ny Lalànan'ny Fitantanam-bola ho an'ny fitantanam-bola ho an'ny famatsiam-bola ny tetikasa tohanan'ny governemanta, ao anatin'izany ny fiaraha-miasa ho an'ny daholobe sy ny famatsiam-bola ankasitrahana.
Ny fahazoana ny zom-pirenena eo ambanin'ny safidy fampiasam-bola NDF dia mitaky fandraisana anjara amin'ny Tahirim-pampandrosoana Nasionaly amin'ny vola farafahakeliny US $ 100,000 isaky ny fangatahana. Ny fandraisana anjara dia amin'ny endrika fandoa indray mandeha.
Ny mpangataka voalohany dia mety ahitana ny vady, zanaka miankina ary ny ray aman-dreny tsy miankina mihoatra ny 58 taona ao anatin'ny fangatahana tsy misy fandraisana andraikitra NDF fanampiny, na dia tokony homena vola ny olona tsirairay sy ny saran'ny fahavitrihana.
Mahitsy ny fizotran'ny fangatahana ary azo raisina amin'ny alalàn'ny mpandraharaha iray izay nahazo alalana avy amin'ny Citizenship by Investment Unit (CIU).
Aorian'ny fandefasanao ny fangatahana anao dia angatahina handoa ny saram-pahavitrihana feno ianao sy ny 10% amin'ny saram-panodinana amin'ny governemanta. Rehefa nahazo taratasy fankatoavana ianao, dia angatahina handoa ny fifandanjan'ny saram-panjakana fanodinana governemanta ianao, ny saram-pasipaoro ary ny fandraisana anjara. Ny vola dia aloa mivantana any amin'ny Unit sy ny fandraisana anjara dia tsy maintsy atao amin'ny Tahiry manokana an'ny governemanta ao anatin'ny 30 andro.
Vantany vao voaray, ny taratasy fanamarinana fisoratana anarana momba ny zom-pirenena dia hatolotra ho an'ny mpangataka voalohany sy ny fianakaviany izay hatolotra ny biraon'ny pasipaoro miaraka amin'ny fangatahana pasipaorony sy ny antontan-taratasy miaraka. Ny mpisolovava / solontenanao nomenao dia hanolotra ny antontan-taratasinao momba ny pasipaoronao sy ny maha-olom-pirenena anao.
Fandraisana anjara amin'ny Tahirim-pirenena ho an'ny fampandrosoana
A. Ho an'ny mpangataka tokana, na fianakavian'olona 4 na latsaka
Fandraisana anjara US $ 100,000
B. Fianakaviana 5 na mihoatra: -